Shaxda Rasmiga Ah Ee Barcelona v Sundowns: Messi Oo Keydka Kusoo Bilowday & Suarez Oo Weerarka Hor-kacaya %
Kooxaha kubada cagta ee kala ah, Barcelona iyo Mamelodi Sundowns ayaa waxay si rasmi ah ay ugu wada dhawaaqeen liiska min 11-ka ciyaaryahan ee garoonka usoo geli doonta kulan ciyaareedkooda ah mid saaxiibtinimo.
Ciyaartaan oo lagu dheelayo garoonka Loftus Versfeld Stadium ayaa waxaa lagu maamusayaa dhalashadda 100aad ee Madaxweynihii hore ee dalka Koonfur Afrika, kaasoo geeryooday mar sii horeysay laguna magacaabo Nelson Mandela.
Tababaraha Barcelona ayaa waxaa kulankaan uu kula sii shir-tegay garoonka ciyaaryahano uu is-leeyahay ugu yaraan guul ayey kuu horseegi karaan, isagoona umuuqda mid xoogaa nasiino siiyay laacibiitiisa waa weyn.
Xidigaha keydka kasoo muuqday waxaa kamid ah Lionel Messi, kaaso si lamid ah kulankii lasoo dhaafay aan dheelin, Gerard Pique ayaa sidoo kale qeyb ka ah ciyaartoyda uu Ernesto Valverde keydka uu kusoo bilaabay.
Laakiin, wuxuu kusoo bilaabay Valverde Andres Iniesta, Luis Suarez iyo laacibiin kale, kuwaasoo weerarka iyo khadka dhexe ee naadiga Barcelona hogaamin doonta, islamarkaana kulankaan shaqada ugu badan laga sugayo.
HOOS KA ARAG SHAXDA LABADA KOOX
BARCELONA: Ter Stergen, Digne, Mina, Samedo, Alena, Rakitic, Iniesta, Sergio Basquets, Denis Suarez, Dambele iyo Luis Suarez
KEYDKA: Cillessen, Piqué, Messi, Coutinho, Paulinho, Paco Alcácer, Jordi Alba, S.Roberto, André Gomes, Aleix Vidal, R.de Galarreta iyo J.Cuenca
Barcelona v Sundowns
Diego Maradona Oo Loo Magacaabay Madaxweynaha Koox Caan Ah Xili Uu Ka Hadlay Dareenkiisa